ကမ္ဘာပေါ် ရှိ A မှ Z အထိ ကား Brand Name များ
ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ Motoring ကဏ္ဍအတွက်တော့ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က တရုတ်နိုင်ငံထုတ် Car Brand တွေရဲ့ အဆက်ကို ဖော်ပြပေးမှာပါ။ အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း တရုတ်ရဲ့ စီးပွားရေးဟာ အချိန်တိုအတွင်း တိုးတက်လာခဲ့ပြီး အခုဆိုရင် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ ကားစက်ရုံတွေအပါအဝင် ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က လာရောက်ဖွင့်လှစ်တဲ့ စက်ရုံပေါင်းကလည်း မနည်းလှတော့ပါဘူး။
တရုတ်ကား Brand Name များ
တည်ထောင်သည့်ကာလ - ၁၉၅၅ - လက်ရှိ
ရုံးချုပ်တည်ရှိရာ - Shanghai၊ China
တည်ထောင်သူ/မိခင်ကုမ္ပဏီ - Assets Super vision and Administration Commission
ဝက်ဘ်ဆိုက် - http://www.saicmotor.com/
SAIC Motor Corporation ဟာ ရှန်ဟိုင်းမြို့မှာ အခြေစိုက်တဲ့ နိုင်ငံပိုင် ကားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကုမ္ပဏီဟာ Dongfeng Motor၊ FAW နဲ့ Chang’an Motors တို့နဲ့အတူ နိုင်ငံရဲ့ အကြီးဆုံးကားထုတ်လုပ်သူလေးဦးထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကုမ္ပဏီကနေ တရုတ်နိုင်ငံမှာ ဆီစားသက်သာပြီး ဇိမ်ခံကားတွေ ထုတ်လုပ်ရာမှာ ကျော်ကြားပါတယ်။ SAIC Motor Corporation ဟာ General Motors၊ Volkswagen၊ Volvo တို့နဲ့ ဖက်စပ်လုပ်ကိုင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
တည်ထောင်သည့်ကာလ - ၁၉၆၉ - လက်ရှိ
ရုံးချုပ်တည်ရှိရာ - Wuhan၊ Hubei၊ China
တည်ထောင်သူ/မိခင်ကုမ္ပဏီ - Mao Zedong
ဝက်ဘ်ဆိုက် - http://www.dfmc.com.cn/
Dongfeng ဟာလည်း တရုတ်ရဲ့နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ SAIC Motor လို နိုင်ငံရဲ့ အကြီးဆုံးကုမ္ပဏီလေးခုထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကုမ္ပဏီကနေ ဈေးသက်သာတဲ့ကားတွေ၊ လုပ်ငန်းသုံးကားတွေနဲ့ ခရီးသည်တင်ယာဉ်၊ လော်ရီ၊ ထရပ်နဲ့ အခြားသောယာဉ်တွေထုတ်လုပ်နေပါတယ်။ Dongfeng ဟာ တရုတ်နိုင်ငံတစ်ဝန်း ဖက်စပ်လုပ်လုပ်ငန်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ သူ့ကားတွေကို UK၊ Paraguay၊ Vietnam နဲ့ Philippines တို့မှာလည်း ထုတ်လုပ်ရောင်းချနေပါတယ်။
တည်ထောင်သည့်ကာလ - ၁၉၅၃ - လက်ရှိ
ရုံးချုပ်တည်ရှိရာ - Changchun, China
တည်ထောင်သူ/မိခင်ကုမ္ပဏီ - Government of China
ဝက်ဘ်ဆိုက် - http://www.faw.com/
တရုတ်မှာရှိတဲ့ အကြီးဆုံးလုပ်ငန်းတွေ တော်တော်များများက နိုင်ငံပိုင်တွေများပါတယ်။ ကားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းမှမဟုတ်ဘူး။ ရေနံနဲ့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ထုတ်လုပ်ရေးလို၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလို ကုမ္ပဏီကြီးတွေတော်တော်များများဟာ နိုင်ငံပိုင်တွေများပါတယ်။ အခု FAW Group Corporation က တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံးကားထုတ်လုပ်ရေးလုပ် ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ နိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးကား ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီလေးခုထဲက တစ်ခုဖြစ်ပြီး နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကုမ္ပဏီကနေ အဓိက ကားအစိတ်အပိုင်းတွေနဲ့ မီး၊ အလယ်အလတ် ခရီးသည်တင်ယာဉ်တွေ၊ ထရပ်ကားကြီးတွေကို ထုတ်လုပ်ပါတယ်။ FAW Group ဟာ များစွာသော ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ JV လုပ်ထားပြီးတော့ အဲဒီထဲ FAWER? Volkswagen? Toyota? Yangzi? Otey? Hongqi နဲ့ Besturn တို့နဲ့ ချိတ်ဆက်ထားပါတယ်။
တည်ထောင်သည့်ကာလ - ၁၉၅၈ - လက်ရှိ
ရုံးချုပ်တည်ရှိရာ - Beijing, China
ဝက်ဘ်ဆိုက် - http://www.baicgroup.com.cn/
BAIC Group ဆိုတာ Beijing Auto- motive Industry Holding Corporation ရဲ့ အတိုကောက်နာမည် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကုမ္ပဏီကလည်း နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကုမ္ပဏီကနေ ခရီးသည်တင်ယာဉ်နဲ့ လုပ်ငန်းသုံးကားတွေအဓိကထုတ်လုပ်ရောင်းချနေပါတယ်။ BAIC မှာ ကောင်းမွန်တဲ့သမိုင်းကြောင်းတွေရှိသလို ထင်ရှားပြီး ကားထုတ်လုပ်မှုမှာ Top 10 ဝင်တဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ သူနဲ့ JV လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေမှာဆိုရင် Hyundai၊ Benz၊ Jeep၊ Foton Daimler တို့ရှိပါတယ်။ ကုမ္ပဏီကနေ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ ယာဉ်အစီးရေ ၂ ဒသမ ၂၅ သန်းကျော်အထိ ထုတ်လုပ်ရောင်းချနိုင်ခဲ့ပြီး တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ လေးခုမြောက် အကြီးမားဆုံးကားထုတ်လုပ်သူစာရင်းထဲဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
တည်ထောင်သည့်ကာလ - ၁၉၉၇ - လက်ရှိ
ရုံးချုပ်တည်ရှိရာ - Guangzhou၊ Guangdong၊ China
တည်ထောင်သူ/မိခင်ကုမ္ပဏီ - Guangzhou Automobile Industry Group
ဝက်ဘ်ဆိုက် - http://www.gagc.com.cn/
GAC Group ဟာ Guangzhou Automobile Group ရဲ့ အတိုကောက်ဖြစ်သလို နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Guangzhou မြို့မှာ အခြေစိုက် ပြီးတော့ ခရီးသည်တင်ယာဉ်တွေနဲ့ စီးပွားရေးသုံးယာဉ်တွေ ထုတ်လုပ်ရောင်းချပါတယ်။ နောက်ပြီးသူ့ အောက်မှာ Trumpchi နဲ့ Gonow တို့လိုကုမ္ပဏီတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ကုမ္ပဏီကနေ ဆီစားသက်သာပြီး ကျော်ကြားတဲ့ SUV အမျိုးအစားကားတွေကိုလည်း ဈေးကွက်ထဲထုတ်လုပ်ရောင်းချပါတယ်။
တည်ထောင်သည့်ကာလ - ၁၉၆၄ - လက်ရှိ
ရုံးချုပ်တည်ရှိရာ - Hefei, Anhui, China
တည်ထောင်သူ/မိခင်ကုမ္ပဏီ - Dennis Bedford
ဝက်ဘ်ဆိုက် - http://www.jac.com.cn/
JAC Motors ရဲ့ နာမည်အပြည့်အစုံက Anhui Jianghuai Automobile Corporation ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာလည်း လုပ်ငန်းသုံးယာဉ်တွေ ထုတ်လုပ်တဲ့ နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် JAC Motors ကနေ SUV နဲ့ ထရပ်ကားတွေ ထုတ်လုပ်ရာမှာလည်း ကျော်ကြားပါတယ်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တုန်းက ကုမ္ပဏီကနေ ယာဉ်အစီးရေ ၄၄၅,၀၀၀ အထိ ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံထဲ ယာဉ်အများဆုံးထုတ် လုပ်တဲ့စာရင်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။
ရုံးချုပ်တည်ရှိရာ - Jingdezhen၊ Jiangxi၊ China
တည်ထောင်သူ/မိခင်ကုမ္ပဏီ - Chang’an Motors
ဝက်ဘ်ဆိုက် - http://www.changheauto.com/
Changhe ရဲ့ နာမည်အပြည့်အစုံက Jiangxi Changhe Automobile Corporation ဖြစ်ပါ တယ်။ ဒီကုမ္ပဏီဟာ Suzuki နဲ့ ဖက်စပ်လုပ်ကိုင်နေပါတယ်။ ကုမ္ပဏီကနေ အများအားဖြင့် Suzuki ကထုတ်တဲ့ကားတွေကို ဒီဇိုင်းပြန်ဆွဲပြီး ထုတ်လေ့ ရှိပါတယ်။ တစ်ခါတလေ Suzuki နဲ့ နာမည်တွေ တောင်အတူတူထုတ်လေ့ရှိပါတယ်။ Changhe ဟာ ထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့ ကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီး တစ်နှစ်ကို ပျမ်းမျှယာဉ်အစီးရေ ၂၆၀,၀၀၀ လောက်အထိ ထုတ်လုပ်ပါတယ်။
တည်ထောင်သည့်ကာလ - ၂၀၀၃ - လက်ရှိ
ရုံးချုပ်တည်ရှိရာ - Taizhou၊ China
တည်ထောင်သူ/မိခင်ကုမ္ပဏီ - GAC Group
ဝက်ဘ်ဆိုက် - http://www.gonowauto.com/
Gonow နာမည်အပြည့်အစုံက Zhejiang Gonow Automobile Corporation ဖြစ်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီကနေ စိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့၊ စွမ်းအင်ပြည့်တဲ့၊ ဆီစားသက်သာတဲ့ SUV နဲ့ လုပ်ငန်းသုံးယာဉ်တွေကို ထုတ်လုပ်ပါတယ်။ GAC group ရဲ့ ကုမ္ပဏီခွဲတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီကနေ တစ်နှစ်ကို ယာဉ်အစီးရေ နှစ်သိန်းကျော်အထိထုတ်လုပ်နေပါတယ်။
တည်ထောင်သည့်ကာလ - ၁၉၉၆ - လက်ရှိ
ရုံးချုပ်တည်ရှိရာ - Changping၊ Beijing၊ China
တည်ထောင်သူ/မိခင်ကုမ္ပဏီ - Beijing Automotive Industry Holding Co., Ltd.
ဝက်ဘ်ဆိုက် - http://www.foton-global.com/
Foton Motor ဟာလည်း ထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့ Beiqi Foton Motors၊ ဒီဇိုင်းတွေနဲ့အတူ လယ်ယာသုံးယာဉ်၊ ခရီးသည်တင်ယာဉ်၊ ထရပ်နဲ့ SUV ကားတွေကို ထုတ်လုပ်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီဟာ Beijing ရုံးစိုက်ပြီးတော့ BAIC Group ရဲ့ ကုမ္ပဏီခွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တုန်းက Foton ကနေ အစီးရေ ၆၄၀,၀၀၀ အထိထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
တည်ထောင်သည့်ကာလ - ၂၀၀၅ - လက်ရှိ
ရုံးချုပ်တည်ရှိရာ - Zhejiang၊ China
တည်ထောင်သူ/မိခင်ကုမ္ပဏီ - Zotye Holding Group
ဝက်ဘ်ဆိုက် - http://www.zotye.com/
Zotye Auto ဟာ Zotye International Automobile Trading Corporation ဖြစ်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီကနေ လုပ်ငန်းသုံးနဲ့ ခရီးသည်တင်ယာဉ်တွေထုတ်လုပ်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီကို Zotye Holding group ကို ပိုင်ဆိုင်ပါတယ်။ တခြားပြိုင်ဘက်တွေနဲ့အတူ နိုင်ငံအချို့ကို တင်ပို့ရောင်းချပါတယ်။ Z500? V10? T600? T200? Z300? Z200? Z100? JN Auto M300 နဲ့ Z200HB ယာဉ်အမျိုးအစားတွေဟာ ကျော်ကြားတဲ့ကားတွေဖြစ်ပါတယ်။
အထက်မှာဖော်ပြခဲ့တာကတော့ လက်ရှိအချိန်အထိထုတ်လုပ်နေတဲ့ ကားကုမ္ပဏီတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီးတော့ အရင်တုန်းက ထုတ်လုပ်ပြီးတော့ ရပ်ဆိုင်းသွားတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေအကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံ မော်တော်ယာဉ်သမိုင်းမှာ ထုတ်လုပ်မှုရပ်ဆိုင်းသွားရတဲ့ ကုမ္ပဏီက အနည်းအကျဉ်းပဲရှိပါတယ်။ Fuxing Automobile Company ဟာ ၁၉၉၄ ခုနှစ်မှာ ဈေးကွက်ထဲ စဝင်ခဲ့ပြီးတော့ ၁၉၉၈ ခုနှစ် ရပ်ဆိုင်းသွားရပါတယ်။ နောက် Liming Autos ဟာလည်း ၁၉၉၆ ခုနှစ်မှာ ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့ ၁၉၉၉ ခုနှစ်မှာ ပိတ်လိုက်ရပြန်ပါတယ်။ ဒီကုမ္ပဏီနှစ်ခုပဲ ဆက်မထုတ်တော့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး နောက်အပတ်တွေရဲ့ Motoring ကဏ္ဍမှာလည်း ကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ထူးခြားတာတွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပရိသတ်ကြီး သိသင့်သိထိုက်တာတွေကို ဖော်ပြပေးပါဦးမယ်။
Reference – Global Car Brands